Ahoana no niovan'ny varotra B2B | Martech Zone
Alarobia, Desambra 11, 2013 Talata, Desambra 10, 2013 Douglas Karr
Ity infographic avy amin'ny Hamafiso ny haino aman-jery sosialy Mametraka tsara ny tombony amin'ny marketing anaty ho anisan'ny fizotran'ny varotrao amin'ny ankapobeny. Mampalahelo anefa fa misafidy ny hametraka paikady iray mifanohitra amin'ny iray hafa izy ireo fa tsy hanome ny fomba hanambaran'ny ankamaroan'ny orinasa B2B ireo paikady roa.
Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny fomba miditra sy ivelany mankany amin'ny varotra B2B, azonao atao ny misambotra sy mamantatra ny fitarihanao rehefa mifampiresaka amin'ny atiny sy ny hetsika sosialinao an-tserasera. Manome angona mahafinaritra ho anao izany Mivoaka hetsika. Izy io dia ahafahanao mampianatra ny fahatsinjovanao ary hitondra azy ireo amidy. Izy io dia ahafahan'ny ekipa mpivarotra hanakatona ny varotra haingana kokoa, hampiakatra ny sandan'ny varotra ireo ary hampifanaraka ny mpanjifa tsara amin'ny vokatra sy serivisy omenao.
Niova ny varotra B2B - fa ny fampiasana paikady miditra sy miditra dia afaka mampitombo ny vokatra varotrao, mampitombo ny vokatra azo, ary mitondra ny fahefana ilain'ny marika anao amin'ny varotra mahomby.
Tags: b2b marketingfitorahana bilaogyCalling coldmail mivantanaatiny fanabeazanamailaka Marketingmampihiditravarotra miditraMivoakavarotra ivelanymailaka miorina amin'ny fahazoan-dàlanaPrintfiverenana amin'ny fampiasam-bolarfpsROISEOhaino aman-jery sosialyFampisehoana
Lahatsoratra feno fahitana!